Trano famokarana tavoahangy tsara indrindra - TopFillers
Home / Famonoana machinery / Bottle Filling Machine
Ny NPACK dia manamboatra fitaovana isan-karazany mba hamenoana ny ankamaroan'ny karazana vokatra ho karazana varimbazaha. NPACK fillers dia mampiasa ny teknolojia farany mba hahatratra ny haingo faran'izay haingana indrindra sy tavoahangy feno indrindra amin'ny tsena. Ny fitaovam-pamokarana NPACK dia afaka manangona vokatra mahavelona maimaim-poana, vokatra izay mibontsina be na matevina, vokatra izay mibontsina fo, vokatra miteraka na mangahazo, vokatra misy tsikirikirika na kiraro, ary vokatra maina.
Manolotra fitaovana fanodinana feno sy tavoahangy vita amin'ny tavoahangy vita amin'ny tavoahangy sy plastika, boasary & saka.
Ny teknolojia famenoanay dia manampy ireo marika avo lenta hampiato ny famokarana haingana sy haingana. Afaka mamokatra tavoahangy 2,300 isan'ora ny Meheen izay feno automatique, pneumatic powered ary afaka manampy anao hampitombo ny fizarana, ny vola miditra sy ny tombony azo avy amin'ny tavoahangy voalohany sy ny sisa.
Ny tavoahangy NPACK izay mameno sy mamarana ny milina dia afaka miasa na tsirairay na amin'ny famokarana feno. Izy io dia famenoana famonoana sy famaranana fiara matevina ho an'ny fanodinana otrikaina vita amin'ny tavoahangy.
Famokarana haingana haingana
Ny faratampontsika dia hanome fahafaham-po ny fitakiana rehetra amin'ny tavoahangin-tsakafo sy ny fonosana.
Bottle Filling Machine, Famonoana machinery
Fampiharana momba ny vokatra Ity fitaovana ity dia mety amin'ny famenoana sy famenoana ny fameno sy famenoana ny 10-50Kg. Ampiasao avy hatrany ny isa ao anatin'ilay tavoahangy, manosika ny lanjan'ny famenoana, mampita tavoahangy misy tsanganana. Indrindra indrindra ho an'ny mpiasan'ny rano, menaka misy menaka, menaka fanosotra, sns., No milina fanenomana tsara indrindra ho an'ny sakafo, indostria sy medika. Mameno miditra tsimoramora 6 lohany mitarika 4 fahaiza-mitarika famokarana ≦ 600Barrels isan'ora (amin'ny rano toy ny mpanelanelana amin'ny tontolo) ≦ 400Barrels isan'ora (amin'ny rano toy ny mpanelanelana amin'ny tontolo) ampiharina amin'ny siny halavan'ny habe: 160mm ~ 360mm; width: 140mm ~ 260mm; height: 250mm ~ 500mm Outline dimensions ...
1. Introduction 1.1 Servo Drive System Package Leader's volumetric filling system exclusively uses the system servo drive to control the main filling structure to achieve the high stability and precise positioning. 1.2 Piston voatery voatery Ny fihokatr'ilay fihoaram-pefy mihetsika amin'ny famolahana ny piston dia mifamatotra amin'ny rafitra fanaraha-mason'ny servo irery ihany dia manome ny vokatra mahamiram-bola mandritra ny fotoana maharitra, fa koa mamorona vokatra tsara amin'ny fihenan'ny vidin-tsakafo. 1.3 Fitaovana maimaim-poana ny fitaovana maimaimpoana maimaim-poana rehefa manova ny volan'ny famenoana; Amin'ny alalan'ny fanalahidy - amin'ny laharana faniriana ao amin'ny PLC dia manome ny mpampiasa ny vokatra tsara indrindra. The delicate ...
Fampiharana: Ny famokarana masira dia ampiasaina betsaka amin'ny famenoana menaka samihafa sy ranon-drongony, fitaovana maitso, toy ny menaka oliva, menaka fanosotra, menaka kanola, menaka, menaka manitra, sesame paste, saosy tazo, saosy chili, paste bean, shrimp paste, siramamy apipe, salady dressing, caviar, sns. Tsiambaratelo: 1. Marika manerantany ho an'ny orinasa elektrônika sy pneumatic, tsy fahombiazana ny tahan'ny tsy fahombiazana, ny fahombiazan'ny fahombiazana sy ny fahamendrehana, ny fiainana an-davan'andro. 2. Ny fifandraisana amin'ny fitaovana dia vita amin'ny metaly 304 # (araka ny fangatahan'ny mpanjifa mampiasa ny 316 # stainless steel), fanala mora, fanadiovana mora, mifanaraka amin'ny fepetra ara-tsakafo. 3. Ny famenam-bolana sy ny famenoana fanitsiana haingana dia tsotra, ...
Product Description Fampiharana Mihatra betsaka amin'ny famenoana ny vokatra any amin'ny indostria toy ny sakafo, kojakojam-pandriana, fanafody, grefy, indostrialy ara-indostrialy isan-karazany, savony, indostria orinasa mpamokatra solika, sns. Characteristic: 1. Ny fampiasana ny rivotra dia mampita ny fidirana sy ny famindrana kodiarana ao amin'ny tavoahangy mivantana teknolojia; Voarakitra vetivety ny rindrina ary ny rojo vy, ka lasa mora kokoa ny fiovana ny fanovana. 2. Fandefasana tavoahangy dia mametraka teknolojia fanodinana clip, paikady vita amin'ny tavoahangy tsy mila manitsy ny sehatry ny fitaovana, manova fotsiny ny mifamatotra ny takelaka efajoro, ny kodiarana ary ny tsy misy ny ampongabendanitra dia ampy. 3. Ny tavoahangy vita amin'ny ravin-tsakafo tsy misy fangarony dia mafy sady maharitra, tsy misy mahakasika ny toerana misy ny vavan'ny tavoahangy.
Vodka vita amin'ny tavoahangy vita amin'ny tavoahangy Vodka vita amin'ny tavoahangy vita amin'ny tavoahangy BGF Fitrandrahana rano fisotro madio 3-in-1unit: Mampiasaina ny famokarana masin-jiro mba hamokarana masom-biriky. Ny BGF ny fanasan-koditra BGF amin'ny fanodinana biriky dia afaka manatontosa ny dingana rehetra toy ny tavoahangy fanontam-pirinty, ny famenoana sy ny famehezana, ka mety hampihenana ny fitaovana sy ny Outsiders hanamora ny fotoana, hanatsara ny toe-pahasalamana, ny fahafaha-mamokatra ary ny vokatra ara-toe-karena. Character 3.Osingin'ny rivotra ny fidirana sy ny famindrana kodiarana ao amin'ny tavoahangy mivantana teknolojia; Voarakitra vetivety ny rindrin-tseranana sy ny fifamatorana, ka lasa mora kokoa ny fiovana. 1. Fandefasana entana vita amin'ny tavoahangy dia mampita ny teknolojia fanjonoana clip, fanovana vita amin'ny tavoahangy tsy mila manitsy ny fitaovana ...
Tranofa vita amin'ny volvo lava volomparasy
Ny fitsipika arahina 1 dia nametraka ny tavoahangy sy ny kapa amin'ny fomba samihafa ao amin'ny Vibrator Tilted Hopper & Cap. Ny tavoahangy dia hikarakara ny tendron'ny tavoahangy Hopperwith mankany amin'ny làlan-tavoahangy & tavoahangy mankany anoloana, mipetraka eo amin'ny Fandefasana Fandefasana entana mba hatolotra amin'ny tavoahangy bottle. 2. Fetin'ny tendrontany ambony, tavoahangy ambany miverina, tavoahangy tavoahangy no tonga tavoahangy; Rehefa avy tsy misafotofoto dia hitsangana ny tavoahangy ary halefa any amin'ny tobin-tsolika ao anaty fiara. 3.Eye detection station: manamarina raha misy tavoahangy feno. 4.No tsy misy tavoahangy. Fivarotana 5.Filling: rehefa tonga eo ambanin'ny toeram-pamakiana ny tavoahangy, mameno ...
Fampidiran-dresaka fohy Manambonera solontenan'ny SIEMENS (SIEMENS) an'ny SIEMANA tany am-piandohana mba hiantohana ny fahamendrehan'ny rafitra. Misafidiana herinaratra herinaratra, fanaraha-maso ny pneumatic, miaraka amin'ny fahombiazan'ny fitomboana. Ny fototeny finday dia mamaritra ny vokatra alemana, miaraka amin'ny kalitao azo itokisana. Ny fitaovam-piadiana mahery vaika manara-maso dia miantoka fa tsy misy ny fivalozana mandritra ny famokarana. Ho an'ny dingana isan-kerinandro, ny fanolorana fizarana voalohany dia mamaritra ny fihenan'ny fihenan'ny fihenam-bidy, ny fahombiazan'ny fitomboana, raha toa kosa ny dingana manaraka (fametahana, fanoratana ranomainty, jiro fanamarinana sy ny fanisiana doka, sns) izay mamela ny famokarana manontolo amin'ny fomba mahitsy kokoa sy madio. Ny famenoana haingam-pandeha avo roa sy ambany dia afaka misoroka ny trangam-pandehany, ary afaka ...
Famenoana haingana sy fametahana milina ho an'ny tavoahangy plastika sy lamandy
Fampidirana: Ny ampahany fanaraha-maso ao amin'ny milina dia ahitana fitaovana manadinadina ny ordinatera, fampisehoana lehibe ary ny fanamafisana ny fiasan-tseraseran'ny fiasa, fiasa toy ny famerana ny fandaharam-potoana, ny famerana haingana ny famolavolana, ny famenoana ny haingam-pandeha, ny fampisehoana maimaim-poana, ny fahitalavitra ary ny fanaraha-maso. Ireo singa ao amin'ny milina izay hifandray amin'ny fitaovana fametrahana dia vita amin'ny SUS304 sy SUS316L tsy misy vy. Ny fonony mangarahara, ny famonoana ny entana, ny fitaovana ampiasaina dia omena miaraka amin'ny milina. Ny milina dia hita miaraka amin'ny fiarovana amin'ny fiarovana, auto-stop, toerana mavo, fanaraha-maso diplaomatika, sns. Ao anatin'ilay dingan'ny famokarana sy ny fametrahana, ny famenoana sy ny famehezana, ny fanoherana dia ...
Tetikasan'ny tavoahangy bitika automatique fametrahana milina / tetikasa tavoahangy
Masinina telo-in-iray ho an'ny tavoahangy PET dia mampifandray ny asan'ny fantsona, famenoana ary ny fako miaraka. Mifototra amin'ny teknolojia avo lenta, ary novolavolaina araka ny fangatahana fanodinana rano fangatahana ny singa fototra 1.This masinina dia manana rafitra sarotra, rafitra fanaraha-maso, mora ampiasaina ary automated. 2. Ny fanovana ny kodiarana kodiarana, ny sifotra fisidinan'ny tavoahangy sy ny biriky fitaratry ny arc dia afaka mahatsapa ny fanovana ny endrika tavoahangy. 3. Ireo ampahany mifandray mivantana amin'ny vokatra dia vita amin'ny haingon-tsakafo tsy misy fangarony ary tsy misy teknolojia efamira ary mora diovina. 4. Ny fananganana tobin-pamokarana haingam-pandeha, ny haavon'ny liana dia mazava sy tsy misy fako. Izany ...
Fiatoana haingam-pandeha haingana vitan'ny automatique
Famakafakana: Ny milina dia mety amin'ny tavoahangy sy tavoahangy tavoahangy. Afaka mameno siropia, lipometrika sns. SUS304 stainless steel peristaltic pumple volumetric filling, miaraka amin'ny fametrahana ny mari-pamantarana avo lenta, fiasana mafy sy miasa mora etc ...; hihaona ny GMP. Ny milina dia mamoaka tavoahangy eo amin'ny latabatra fihodinana amin'ny alalan'ny fitaterana, ny takelaka eo ambony latabatra dia maka tavoahangy any amin'ny toeram-piantsonana tsirairay avy, avy eo mameno, asio fantson-kitapo, boban-tsofina ary manatona ny fifamoivoizana ao amin'ny toeram-piantsonana tsirairay, manamarina ny lozam-pifaneraserana ary mitondrà fanao hafa Ny tsipika amin'ny alàlan'ny herinaratra, pneumatic ary rafitra mba hahatontosana ny asa etsy ambony. Famolavolana drafitra: Dingana 1st: hamotsotra ilay tavoahangin-tsakafo tavoahangy ...
5 gallon tavoahangy vita amin'ny tavoahangy
Fehezanteny Amin'ny fampiasana rojom-bolamena tsy milamina, ny kalitao dia manome antoka ny fandaharam-pamokarana tsara amin'ny programa fanaraha-maso amin'ny fikojakojana mora 150B / H 5 rano fisotro rano feno ranomandry QGF120 baoritra famokarana rano famintinana Famintinana Ny karazam-borona rano QGF120 karazana rano no fitaovana fototra amin'ny tsipika famokarana rano fisotro rano 5 Gallon. Izy io no fitaovana tsara indrindra ho an'ny rano mineraly, rano voadio sy dipoavatra. Ny milina dia vita amin'ny vy fanamarihana tsy misy fangarony, ary ny tombony azo avy amin'ny fanalefahana mora sy ny kolikoly. Ny ampahany lehibe amin'ny herinaratra dia mamaritra ny vokatra miaraka amin'ny marika SIEMENS sy OMRON. Ny ampahan'ny pneumatic dia mamokatra vokatra miaraka amin'ny marika AIRTAC. Samy ...
4 mitarika milina fanondrahana tavoahangy mofomamy
Ny fampiharana: Ny lohan'ny tavoahangy vita amin'ny tavoahangy misy lasantsy dia mety amin'ny fitaovana: ny solika, ny solon-tsolika, ny solika, ny menaka fanosotra ary ny solika sns. Ny fitsipika sy ny endri-tsoratra: Ny fametrahana ram-ram-pitaovana, ny fampiasa ny PLC programmable control, miaraka amin'ny rafitra fanenonan-tarehy manodina ny masinina, manamboatra automatique filling, automatique capping .it dia mifanaraka amin'ny tavoahangy samihafa sy ny kapo, dia manao fanitsiana kely ihany. Ny toetra: Xumum.SS1L pomp-basy dia mameno ny mari-pamantarana avo lenta tsara ho an'ny ranon-tsavona sy ny hafanana mazava amin'ny gripa. 316. Ity milina ity dia endrika miavaka, manalefaka ny tavoahangy fitaterana, matevina kokoa. 2.No tavoahangy tsy misy fanamafisana. 3.Auto fihenam-bolana mihetsika manitsy haingana. 4.Auto ...
Famokarana bozaka automatique 30ml 100ml Fandefasana entona milina
Ny famenoana ny fiatoana sy ny kapila manify izay ilaina amin'ny iankinan'ny entana ary ny karazan-tsakafo rehetra, ny fiatoana, ny fametahana ny tapa-tapa-tavoahangy, ny fametahana ny kapila ary ny kapaoty, ny kapila, araka ny filazan'ny mpanjifan-tsakafo mpanjifa mpanjifa dia afaka manampy ny fisakanana, ny N0 dia tsy mitoetra intsony Ampidiro ny kapila ary atsofohy ny rafitry ny rafitra fanamafisana ny orinasa teknika ao Shengguan, manindrona sy manamboatra ny kapo-tsoratry ny rafitra mampiasa ny manipulator, ny tanjona voafaritra, ny taham-pahavitrihana mihoatra ny 99.9% .Fanorenana maoderina izany. Ny rafitra fiarovana dia afaka mamokatra vokatra aseptika.Amin'ny filàn'ny teknolojian'ny mpanjifa dia afaka manome fahafaham-po ny fepetra samihafa sy ny haingon-dàlana. Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy, tsy nisy teny manokana voalaza Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny latina
5ml 10ml 15ml automatique fantsom-bokotra misy ranon-tsavony mameno ny milina fanodinana
Fampiharana: Io fitaovana io dia ampiasaina indrindra ho an'ny siropo, sira, divay, zava-pisotro, soja soja, vinaingitra, menaka oliva, menaka oliva, menaka maina, menaka volom-biby, ranomainty, fanindronana, , dia miasa amin'ny tavoahangy tsy manimba, manasa, mameno sy manaparitaka, ary mametaka azy. Ny fitarafana sy ny endri-javatra dia mampihatra ny fantson-diplaomatika fantson-diplaomatika, mameno ny mari-pana; Ny firafitry ny pompeanina dia manangana orinasa fanontam-pirinty haingana, mora diovina ary ny fanindroany. Ny rafitra fanaraha-maso PLC, ny loko fanehoana an-tsary, ny fiasan'ny automatique. Ny fantsom-pamokarana dia nahitana fitaovana manara-penitra. Rehefa mameno ny ranom-panafody dia mitsoka mankany ambany
Ny tavoahangy vita amin'ny litera Glass 1 dia mametaka manodina sy mametaka ny milina
Tavoahangy mamofona manodina sy mametaka môtô Fikarakarana tavoahangy amin'ny tavoahangin-databatra fandroahana --- Fanampin'ny fanodinana fanodinana --- Fandefasana automatique sy fanodinana fanodinana --- Kapa manodina fanodinana automatique --- Famenoana ny vokatra vita --- Fanamafisana fanodinana automatique FITSIPIKA FIFANEKENA FIFANEKENA MASINA ANJELY: AC220V 50HZ, Max 1KW Viscosity: 1-8000cps Air compression: 0.4-0.6MPa Temperature: <70 ℃ Speed: 10-120 bpm Material: 316L and 304Stainless PARTS SUPPLIERS PLC Control System Mitsubishi, Japan Element pneumatic Hanhae, Korean Photoelectric Capteur KEYENCE, Japan Connection Tube FDA Sakafo Main Features 1. Mora mandositra. Minitra vitsy monja no miova mba hamenoana vokatra famonoana isan-karazany.
Tazo voankazo mamon-drivotra manapotipotika
Fitaovana fanosotra fanosotra milina fanosotra fanosotra
Hazo Fanaovana Sakafo Aterineto Sakafo